इसीमाना सम्वाददाता बीरगंज १७ साउन २०७७ 367 पटक पढिएको
कोरोना भाइरसका कारण संक्रमीत बिरामीको उपचारकालागि बीरगंजमा करिव २ सय ५० बेडको आइसोलेशन वार्ड तयार भएको छ । बीरगंजको गण्डक अस्पतालले ७५ बिरामी भर्ना गरेर सेवा दिन सक्छ ।
गण्डकमै रहेको बीरगंज हेल्थ केयर अस्पतालले करिब १ सय ५० बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार सेवा दिन सक्छ । संघीय सरकारको मातहतमा रहेको नारायणी अस्पताललाई लेभल २ कोभिड अस्पतालको रुपमा संचालनमा ल्याएपछि त्याहा १ सय भन्दा बढी बिरामीले सेवा पाउने छन । यसरी बीरगंजमा संक्रमीतको संख्या बढदै जाँदा आइसोलेशन वार्डको ब्यवस्थापन पनि क्रमिक हुदै गएको छ ।
बीरगंज हेल्थ केयरका अस्पतालका संचालक डा.अबु हैयसले अस्पतालको चावी नेपाल सरकारलाई बुझाएको बताउनु भयो । नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टलाई अस्पतालको चावी आज बुझाएको उहाँले बताउनु भयो । अस्पताल निर्मलीकरण गरेर तयारी अवस्थामा राखेर दिएका छौ उहाँले भन्नु भयो“आजै बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर्न मिल्ने अवस्थामा अस्पताल बुझाएका छौ आजे बिरमी भर्ना गर्दा पनि हुन्छ” ।
यस अघि सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र पर्साले सिफारिस गरे अनुसार वीरगञ्ज हेल्थ केयर हस्पिटललाई कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न दिन मन्त्रलायले अनुमति दिएको छ । केन्द्रले गएको बिहिवार अस्पताल संचालन अनुमतीको माँग राखेर केन्द्रीय सीसीएमसी, गृहमंत्रालय,संघीय स्वास्थ्यमंत्रालय लगायतका सरोकारवाला निकाययलाई पत्राचार गरेको थियो ।
केन्द्रीय तहले पनि एकैदिनमा सबै निकायबाट पर्सा जिल्लाले पठाएको पत्रलाई आ आफनो औपचारिक निकायबाट अनुमोदन गरेर अस्पताल संचालनको अनुमती दिएको हो । शुक्रवार उकै दिनमा यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु प्रसाद कार्कीले जानकारी दिनु भयो ।
नारायणी अस्पतालको मातहातमा रहनेगरी वीरगञ्ज हेल्थ केयर हस्पिटललाई कोभिड अस्पताल बनाएर संचालन गर्ने कुरा टुंगोमा पुगको अस्पतालका संचाल डा. हैयसले बताउनु भयो ।
डा. अन्सारीले अस्पतालमा १०० शैयाको आइसोलेसन, ८ भेन्टिलेटर र ३० वटा आइसीयू बेड रहेको जानकारी दिनु भयो ।